China-Ndlela ezine Radio Shuttle umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
1 Umsebenzi wezandla Ngesandla sebenzisa i-shuttle ukuya phambili, umva, i-jacking, ukubeka phantsi, ukudluliselwa kwecala, njl.
2 Okuzenzekelayo ngaphakathi nangaphandle I-shuttle yeendlela ezine yenza ukusebenza kwangaphakathi kunye nokuphumayo kwiipalethi ngokucwangcisa isoftware.
3 Ukutshintsha okuzenzekelayo Iindlela ezine ze-shuttle zitshintsha iipalethi ukusuka kwindawo enye ukuya kuxela enye kwenye indlela ngokucwangcisa isoftware.
4 Ukubala Bala inani lendlela ngokuzenzekelayo's ipallet, kwaye ubale ngokuzenzekelayo iipalethi ezipheleleyo zangaphakathi neziphumayo.
5 Umsebenzi wokuzifundela Ukulinganisa ngokuzenzekelayo, chonga idatha ye-racking kunye ne-pallet, kwaye ufake iiparamitha ngokuzimeleyo.
6 Ukutshaja kwi-intanethi -Ulawulo lwamandla amanqanaba amaninzi, ukuzigweba kunye nokuzitshaja kumgca.- Kwiimeko ezithile, i-shuttle inokuhlawuliswa ngaphandle komgca ngokukhawuleza.
7 I-alam kwibhetri ephantsi Xa ibhetri iphantsi, i-alam ikhala, i-shuttle iyeka emva kokugqiba umsebenzi okhoyo, ayikokwamkela umyalelo wokusebenza.Icela ikhompyutha engumamkeli ukuba ibize, kwaye ibuyele kwindawo yokutshaja ukuze iphinde itshaje emva kokwamkela iodolo yokutshaja.
8 Ubume benkcazo Inokukhanya kwesalathisi ukubonisa i-alam, i-standby, umsebenzi njalo njalo
9 Ulawulo LWERIMOTHI -Omnye umshicileli wokutshintsha i-intanethi kunye nokusebenza ngesandla kwimowudi yokulawula kude.-Inkxaso yokubeka iliso kwimeko kunye novavanyo olusekwe kwifowuni ephathwayo (i-Android) okanye iPC yeCwecwe (Ngokuzikhethela, imowudi yesandla kuphela)
10 esweni inkqubo Amandla ekuzivavanyeni kwesixhobo, ukujonga idatha yenkqubo ngexesha lokwenyani kunye ne-alam kwisandi kunye nokukhanya kwimeko engaqhelekanga.
11 Umsebenzi okude Iyakwazi ukuhlaziya kunye nokukhuphela inkqubo ukude (Kwi-Wi-Fi Network).
12 Ukujonga ukubetha kwentliziyo Nxibelelana ukubamba inkqubo yolawulo lwekhompyuter ngexesha lokwenyani ngokujonga ukubetha kwentliziyo, ukubeka iliso kwi-intanethi
13 Ukuyeka ngokuNgxamisekileyo Uphawu olungxamisekileyo luthunyelwe ukude ngexesha likaxakeka, kwaye i-shuttle iyama ngoko nangoko de kunyuswe imeko kaxakeka.Iyakwazi ukuqinisekisa isixhobo okanye iimpahla ziyeka ngokukhuselekileyo ekuthotyweni okuphezulu xa isenza lo myalelo.
14 Ngena irekhodi kwaye ulayishe Iyakwazi ukurekhoda ilog yokusebenza kunye nokulayisha ukubamba ikhompyuter rhoqo.
② Loluphi uhlobo lweempahla olufanelekileyo kwinkqubo yokugcinwa kweShuttle yeendlela ezine?
Uhlobo lwephakheji yempahla: Iipalethi
Ubungakanani bempahla (mm): W1200-1300xD1000-1200mm;
Ubunzima obuhle: <= 2000kg
Umnyango wendawo yokugcina impahla ukuze ulayishe kunye nokothula iimpahla.
Pallet Ubude____mm ​​x Ububanzi____mm ​​x Ubude___mm ​​x Ubunzima_____kg.
 Ukusebenza kwangaphakathi nokuphumayo: Ubuninzi beepalethi ngeyure_____.
I-Four-way Shuttle iya kuvavanywa ngaphambi kokuhanjiswa.Injineli iya kuvavanya yonke inkqubo kwisiza okanye kwi-intanethi.
Ngaphambili: Iindlela ezine zokuShutha ezininzi
Okulandelayo: IiShuttle ezininzi
Umhambisi, Qhuba kwi Racking, ICarton Live, IShuttle yomntwana, Asrs Ugcino, I-Four Way Shuttle,